Abavelisi bamazinyo nabavelisi | Umzi mveliso wase China woKhathalelo lwaMazinyo
Isilwanyana sasekhaya esiyiNtloko
Ukucaciswa kweeparameter chwetheza umnwe wamazinyo Inja Ibhrashi yamazinyo Into NO. I-TB203 Umbala wokwenziwa kwezinto ngokobukhulu be-PP Ubungakanani 225 * 18 * 28mm Ubunzima be-9g MOQ 2000PCS Iphakheji / ngeLogo yeNtlawulo eChongiweyo L / C, T / T, Imigaqo yokuHanjiswa kweFOB, i-EXW Inzuzo yePet Double Head Toothbrush Pet Double Head Toothbrush Intloko yesiBini yeNtloko yebrashi yethu yeNkonzo 1.Ixabiso eliPhezulu-Iimveliso eziDumileyo kwixabiso elihle phakathi kwabathengisi.
Umnwe wamazinyo Izinja Ibrashi yamazinyo
1.Iminwe yamazinyo Inja ibrashi yamazinyo yindlela efanelekileyo yokufumana amazinyo ecocekileyo kunye namhlophe. Le Brush yamazinyo yenja yamazinyo yenzelwe ukuba ithambe kwiintsini ngelixa inciphisa i-plaque kunye ne-tartar, inceda ukuthintela izifo zomlomo kunye nokuphefumla kwangoko.
2.Babonisa uyilo olungatyibilikiyo olugcina iibrashi emnweni wakho nakwiindawo ekunzima ukufikelela kuzo. Ibrashi nganye yenziwa ukuba ilingane ubuncinci ukuya kwiminwe ephakathi.
Umnwe wamazinyo we-3.Iminwe yamazinyo ibrashi yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu, i-100% ikhuselekile kwizilwanyana zasekhaya.
Intloko yeNtloko yeNtloko yeNtloko yeNtloko
1.Ngokungafaniyo nezinye iimveliso zebrashi yamazinyo kwimarike, le ntloko yentloko yesithathu yezinja yenja ngeeseti ezintathu zeebristles, uyafika uhlambe ngaphandle, ngaphakathi nangaphezulu kwamazinyo ngaxeshanye!
2. Intloko ekhethekileyo yale brashi isebenza ngakumbi ekususeni ukutya kunye neebhaktiriya kumazinyo ezinja nasezintsinini.
Intloko yesithathu yentloko yezilwanyana zezinyo inja ine-ergonomic rubberized handle elula kakhulu kwaye ikhululekile ukumbamba ukuqhubela phambili ukukhawuleza ixesha lokuzilungisa.
I-4.Ientloko ezintathu zebrashi yamazinyo ezilungele inja kulula ukuyisebenzisa kumntu wonke nakwizibali zokuqala ukuqinisekisa ukuba ibrashi yamazinyo ilula ukuyisebenzisa njengoko isebenza ekukhuthazeni amazinyo kunye neentsini.
Inja yomnwe wamazinyo
I-1.Dog Finger Ibrashi yamazinyo isusa ngobunono iplagi kunye nobutyobo bokutya kumazinyo esilwanyana sakho ngelixa uphulula neentsini.
Ibhokhwe yamazinyo yeminwe ibonelela ngendlela ethambileyo yokususa ingqweqwe kunye nobutyobo bokutya kwizilwanyana zasekhaya.
Isangqa sokhuseleko esiqhotyoshelweyo sifaka ibrashi yamazinyo eminwe kwisithupha sakho, sinceda ukugcina ibrashi ikhuselekile ukhuseleko.